ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးဖိုထဲဓာတ်ငွေ့အရိုးစု China Manufacturer
flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင်,Trapezoid Dedusting လေ့လာကြရအောင်,နွေဦး Dedusting လေ့လာကြရအောင်
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင်,Trapezoid Dedusting လေ့လာကြရအောင်,နွေဦး Dedusting လေ့လာကြရအောင်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ > ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးဖိုထဲဓာတ်ငွေ့အရိုးစု
အိတ် filter ကို၏အရိုးစုအမျှမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏အရည်အသွေး Self-ထငျရှားပါသညျ။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကျနော်တို့ကဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်မလဲ? ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးဘောင်များအတွက်ပက်ဖြန်း electrostatic ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင် plating သာမန်ဇင့်ထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်သောကောင်းတစ်ဦးကာကွယ်မှုအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။
1. သွပ်ပြားဟာ dedusting အရိုးစုကိုအလွယ်တကူအရှင်တိုက်ရိုက်အိတ် filter ကို၏ဘဝအသက်တာကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အထည်အိတ် dusting, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအချက်များကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် corroded ဖြစ်ပါတယ်။
2. ပက်ဖြန်းပြီးနောက်, ကော်နှင့်စက်မှုအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်စေမည်။
3. ပက်ဖြန်းပြီးနောက်, မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစုပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မျက်နှာပြင်ပက်ဖြန်း 4. installation ကိုမှအထောက်အကူဖြစ်သည့်ပိုမိုချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်ပက်ဖြန်း၏နိယာမ: အ workpiece အပေါ်အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောမှ Corona ဥတုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းကတော့အမှုန့်ပေးဝေမှုစနစ်နှင့်ရေမှုန်ရေမွှားသေနတ်၏ရှေ့မှာမြင့်မားတဲ့ဗို့အား electrostatic မီးစက်ဖြင့်ထုတ်လုပ်မြင့်မားဖိအားအားဖြင့်ချုံ့လေကြောင်းဓာတ်ငွေ့အားဖြင့်မှုန်ရေမွှားသေနတ်သို့စလှေတျတျောကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသိပ်သည်းတာဝန်ခံ Corona ဥတုကြောင့်အနီးထုတ်လုပ်နေသည်။ အဆိုပါအမှုန့်ဟာ nozzle ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အခါကတရားစွဲဆိုအပေါ်ယံပိုင်းအမှုန်ဖြစ်ပေါ်လာသော။ ဒါဟာ electrostatic အင်အားစုကစုပ်ယူနေသည်နှင့်၎င်း၏ polarity ကမှစို့နေသည်။ အဆိုပါအမှုန့်တိုးများနှင့်တာဝန်ခံစုဆောင်းအဖြစ်ဆန့်ကျင်တွင်, ပိုသည့်တာဝန်ခံစုဆောင်း။ တစ်ခြို့သောအထူရောက်ရှိသောအခါတပြင်လုံးကို workpiece အချို့အထူနှင့်အတူ coated ကြောင်းဒါသည်ထိစိမ့်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် electrostatic ရှံမု၏ဆက်လက်မဟုတ်ပါ, ထိုအမှုန့်, fused ညှိပြီးနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှတဆင့်ခဲသည်, သောခက်ခဲမျက်နှာပြင်ကိုဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ workpiece ၏။ တစ်ဦးကခဲယဉ်းအပေါ်ယံပိုင်း။
တကယ်တော့သူကရေနံ, သံချေးများနှင့်ဖော့စဖိတ်၏ဖယ်ရှားရေးအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ polyester အမှုန့်ပက်ဖြန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးဖြစ်တယ်, အပူချိန် 180-260 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အကြားထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာကုသပြီးနောက်အအေးရပါမည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင် , Trapezoid Dedusting လေ့လာကြရအောင် , နွေဦး Dedusting လေ့လာကြရအောင် , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင် , အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင် , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး၏လျှောက်လွှာ , flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးကေ့အရိုး